Chiratidziro chitsva chinonyomba mutungamiri weChinese Xi Jinping chinovhura muItari
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Chiratidziro chitsva chinonyomba mutungamiri weChinese Xi Jinping chinovhura muItari
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • dzidzo • Entertainment • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Italy Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Chiratidziro chitsva chekunyomba mutungamiri weChina chinovhura muItari
Vakuru veChinese vakaedza kumanikidza guta kuti rimise chiitiko ichi - asi varongi vakaenderera mberi zvakadaro mukuedza 'kutsigira rusununguko rwekutaura.'
Chinese anopikisa muimbi Badiucao anoseka nhema dze communist Beijing mushoo itsva.
Chiratidziro chitsva chinoshora hudzvanyiriri hwezvematongerwo enyika muChina neChinese censorship yekwakabva hutachiona hweCOVID-19.
Pamberi pekutanga kwechiratidziro, China yakakurudzira vakuru veItaly kuti vasarege kuratidzwa kuenderere mberi.
Mumuseum muBrescia kuchamhembe kweItari Mugovera wapfuura, Art show "China iri (haisi) padyo" neanopokana muimbi kubva kuShanghai, Badiucao, yakavhurwa mumuseum muBrescia kuchamhembe kweItari.
Pave nerunyerekupe rwekuti kuratidzwa uku kunogona kukonzera mhirizhonga huru.
Mutambi akapokana ane mukurumbira nemabasa ake anoshoropodza nhoroondo yekodzero dzevanhu yeChina, uye shoo iyi hainawo.
Rimwe remabasa emuimbi, rinoratidza Mutungamiri weChina Xi Jinping pa Winnie the pooh, zvakatotsamwisa vakuru vakuru veChina. Makore mana apfuura, hunhu hweDisney hwakawira mukunyadziswa nevakuru veChinese uye Chinese masocial network akatanga kudzima nekuchimbidza mifananidzo yeDisney's. Winnie the pooh, nekuti anotaridzika saXi Jinping.
Muimbi uyu akapa mutero kuna chiremba weChinese kubva kuWuhan Li Wenliang, uyo aive wekutanga kutaura nezve coronavirus nekuratidzira mapurisa achidzingirira varatidziri. Uye pane imwe yemaposta ekunyomba kweanouya Chando Olympics, muimbi anoratidza biathlete achinongedza pfuti kumusungwa weUyghur akavharwa maziso.
Mutsamba yakanyorerwa Meya weBrescia, People's Republic of China's Embassy muRome yakataura kuti mufananidzo uyu "uzere nemanyepo anopesana neChinese" uye kuti "vanokanganisa chokwadi, vanoparadzira ruzivo rwenhema, vanotsausa maItaly uye vanogumbura zvakanyanya manzwiro avo. yevanhu veChinese. "
Vakuru veguta nevatarisiri vemiyuziyamu, zvisinei, vakatsikirira mberi nezvirongwa zveshoo.
"Ndaifanira kuverenga tsamba iyi kaviri nekuti yakandishamisa," anoyeuka kudaro Mutevedzeri Meya weBrescia Laura Castelletti, achiidaidza kuti "kupindira" parusununguko rwekugadzira. Chikumbiro chekukanzura chiratidziro, anowedzera, "chakanyanya kutariswa."
"Nekuti hunyanzvi hwangu hunogara hwakanangana nenyaya dzekodzero dzevanhu muChina ... zvinondiita senge rudzi rweNhamba 1 muvengi," Badiucao akaudza vatori venhau.
"Ani nani anoedza kutaura chokwadi kana imwe nyaya yakasiyana nerondedzero yehurumende yeChina anorangwa," Badiucao akadaro.
"Saka ndosaka, kwandiri, zvakandiomera chaizvo kuve neshoo munzvimbo yakasimbiswa, museum yakadai," akawedzera.
Rimwe remabasa anonyanya kutsamwisa mufananidzo wakasanganiswa weMutungamiri weChina Xi Jinping uye Hong Kong Chief Executive Carrie Lam - achiratidza kudzikira kwekodzero mune yaimbova koloni yeBritish.
Kune zvakare nhevedzano yemifananidzo makumi matanhatu nemana yewachi yakagadzirwa nemuimbi neropa rake. Iri basa rinonongedza wachi dzakapihwa masoja eChinese akatora chikamu mukuuraya kwehutsinye kweTiananmen Square muna 64.
Chiratidziro ichi chinosanganisirawo mudziyo wekutambudza uyo wakagadziridzwa zvakare sechigaro chinozunguza. Kwemazuva mashoma ekutanga echiratidziro, Badiucao achagara pachigaro chekutambudza uye averenge kubva mudhayari raakatumirwa nemugari muWuhan. Iro basa rinotsanangura mazuva zana emarekodhi kubva pamatanho ekutanga edenda re coronavirus.
Badiucao akaita mukurumbira muna 2011 mushure mekutumira makatuni paSina Weibo yekuChina mabatiro akaita tsaona yechitima chinomhanya zvikuru muWenzhou. Mifananidzo yakaongororwa kakawanda, kunyange zvazvo muimbi wacho ari mugari weAustralia, zviremera zvenyika zvinoramba zvichimurwisa. Muna 2018, kuratidzwa kwakarongwa kwebasa rake muHong Kong kwakamiswa nekuda kwe "zvikonzero zvekuchengetedza". Varongi vakatsanangura danho iri ne "kutyisidzira kubva kuvakuru veChinese", uye gare gare muimbi akataura kuti nhengo dzemhuri yake muChina dzaityisidzirwa.